China Automatic Cup Type Chemical Filling Machine Line factory sy mpamatsy | Higee
Ity tsipika milina famenoana ranon-javatra ity dia be mpampiasa amin'ny karazan-draha samihafa amin'ny simika, simika isan'andro, sakafo ary indostria hafa. Anisan'izany ny famenoana sy famonoana. Afaka mampita ny tsipika iray manontolo isika avy amin'ny mpamatsy tavoahangy mankany amin'ny mpanangona tavoahangy miaraka amin'ny tsipika famokarana feno.
Karazana amboara Formalin Famonoana ranon-javatra simika amin'ny alàlan'ny Linear Linear Line
Ity milina famonoana famonoana rano ity dia be mpampiasa amin'ny famenoana ranon-javatra ny indostrialy simika, sakafo ary indostria hafa. Izy io dia fenon'ny paompy fandrefesana avo lenta ary mety amin'ny akora samihafa sy tavoahangy samihafa. ity milina ity dia afaka mifandray amin'ny tavoahangy unscrambler sy ny tavoahangin-tsakafo ary ny latabatra fanangonana tavoahangy. Ny firafitry ny masinina dia tsotra sy mitombina, mora ampiasaina, ny vovoka dia tsy voatery raha ilain'ny mpanjifa.
● Ny fifehezana herinaratra rehetra dia mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena, ny singa lehibe indrindra dia singa ampidirina, fanaraha-maso matetika, ary ny haingam-pandeha dia azo ovaina tsy tapaka.
● Ny habetsaky ny famenoana dia fehezin'ny fahendrena, ny fikasihana lamba dia afaka mampiseho fahaiza-mameno. Azonao atao ny mametraka ny habetsaky ny famenoana arakaraka ny fahaizan'ny tavoahangy samihafa.
● Mora be ny miasa nefa tsy miovaova ny faritra.
● loha famenoana anti-drip manokana, effets anti-dripping tsara ary famarana marina.
● Tsy misy tavoahangy tsy misy famenoana, tsy misy tavoahangy tsy misakanana ary tsy misy fanidiana tavoahangy.
● Ny lohan'ny famenoana dia lalina ao anaty tavoahangy amin'ny 2/3, avy eo miakatra mandritra ny famenoana mba hisorohana ny voka-dratsy misy ny rano.
● Fiarovana be loatra sy fiasan'ny fanairana, azo antoka sy azo antoka kokoa.
● Ny rafitra iray manontolo dia fehezin'ny PLC. Ny efijery mikasika ny loko dia mahatonga ny fandidiana ho tsotra kokoa.
● Ny ampahany betsaka amin'ny masinina dia vita amin'ny SS304. Ho an'ny fitaovana manokana izay afaka mahatratra ny fenitra GMP.
● Varingarin'ny paompy matevina avo lenta miaraka amin'ny lohan'ny piston ambany, famolavolana modular, varingarin'ny paompy lava.
● Famaritana mandeha ho azy ny fahan'ny sy ny fivoahan'ny tavoahangy amin'ny alàlan'ny sensor photoelectric, fampifanarahana mandeha ho azy ny fihetsiky ny milina.
Teo aloha: Andalana milina famenoana shampoo mandeha ho azy
Manaraka: Masinina fametahana Linear mandeha ho azy
Masinina mameno ny Sanitizer